ဘယ်လိုရေစိုခံပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိစေတဲ့အိမ်ကြမ်းပြင်လဲ။ - ZD ကြမ်းပြင်ကျွမ်းကျင်သူ
နေအိမ် > ဘယ်လိုရေစိုခံပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုရှိစေတဲ့အိမ်ကြမ်းပြင်လဲ။
အကယ်၍ အိမ်ကြမ်းပြင်သည်ရေစိုခံ။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါက SPC သော့ခလောက်ကိုစဉ်းစားရန်အကြံပြုသည်။ spc သော့ခတ်ကြမ်းပြင်သည်ရေစိုခံမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု၏အားသာချက်များကိုသာမကအောက်ပါအားသာချက် ၈ ခုလည်းရှိသည်။
၁။ Super anti-slip - SPC သော့ကွက်၏ wear -proof layer သည်အထူး anti-slip ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။ ရေကိစ္စတွင်ခြေထောက်သည်ပိုမိုတင်းကြပ်ပြီးစိုရလွယ်ကူသည်။
၂၊ နွေးထွေး။ သက်သောင့်သက်သာ - ကောင်းမွန်သောအပူစီးကူးမှုနှင့်အပူစွမ်းရည်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ တူညီသောအပူဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ကြမ်းပြင်အပူစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း ဦး စားပေး။
3. အစိုဓာတ်ကိုကာကွယ်နိုင်သည် - Polyvinyl chloride တွင်ရေနှင့်မစပ်ဆိုင်ပါ။ စိုထိုင်းဆမြင့်မားသောကြောင့်အရည်ပျော်ခြင်းမရှိပါ။
(၄) Ultra-light နှင့်အလွန်ပါးလွှာသော SPC သော့ခလောက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်အထူ ၃.၂-၁၂ မီလီမီတာနှင့်အလေးချိန်ပေါ့ပါးသည်။ ၎င်းသည်အထပ်မြင့်အဆောက်အ ဦး များ၌ဝန်တင်ခြင်းနှင့်အာကာသချွေတာခြင်းတို့တွင်နှိုင်းယှဉ်။ မရသောအားသာချက်များရှိပြီးအဆောက်အအုံဟောင်းများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတွင်အားသာချက်များရှိသည်။ အထူးအားသာချက်များ။
5. မြင့်မားသော elasticity ဘေးကင်းလုံခြုံမှု - SPC ကြမ်းပြင်သည်လေးလံသောအရာဝတ္ထုများ၏သက်ရောက်မှုများအောက်တွင်ကောင်းမွန်သော elastic recovery ကိုဖြစ်စေပြီးခြေထောက်သည်သက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ၎င်းကိုလူ၏ကိုယ်ခန္ဓာအားမြေပြင်မှပျက်စီးမှုကိုလျှော့ချရန် "soft ground gold" ဟုလူသိများသည်။ ထိတ်လန့်။
၆ ။ အနှစ် ၅၀
8, မီးနောက်ကျ: သဘာဝမဖြစ်နိုင်, အဆိပ်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ပါဘူး။